Hoteelada New York, xulashooyinka raqiiska wanaagsan | Wararka Safarka
Huteelada ku yaal New York, xulashooyin raqiis ah oo wanaagsan
Mariela Carril | | Guryaha, New York
New York Waa magaalo leh hudheel hudheel weyn, nooc kasta, qaabab iyo qiimayaal leh. Lacag ayaad waqti fiican kuheli kartaa hudheelo shan xiddig leh oo aragti weyn ka leh Central Park, dabcan, laakiin xagee aad aadi kartaa hadaadan ahayn Rockefeller?
Maanta waxaan ku siineynaa xulashooyinka hudheelada wanaagsan ee New York in inkasta oo aan la siinin, hadana waxay ilaaliyaan wax aad u badan xiriir wanaagsan oo u dhexeeya qiimaha iyo tayada. Ujeeddo qaado!
Huteelada magaalada New York
Haddii aad tahay safar yar, wax qurux badan, wax hipster, moodada ah, markaa waad isku dayi kartaa hudheelkan oo ka mid ah kuwa ugu da'da weyn magaalada. Waxay ku saabsan tahay SohotelDhawaan ayaa lagu cusbooneysiiyay qaab leh qalab qabow, shumacyo, darbiyada gudaha bulukeeti la soo saaray, dabaqyo adag, iyo raaxo
Huteelkan waa socod gaaban oo SoHo ah, Tuulada East, Little Italy, Nolita iyo Bowery marka ma caban karno. Waxay leedahay WiFi, baar, makhaayad iyo shan qaybood oo qol ahKa ugu sarreeya waa Regency Plus oo leh 400 mitir murabac oo loogu talagalay illaa shan qof. Ma haystaan ​​minibar laakiin waxay leeyihiin bar qabow oo lagu magacaabo Randolph oo leh a saloon biir Wanaagsan dabaqa hoose oo sidoo kale u adeega burgers iyo sandwiches.
Labada qol waxay ka bilaabmaan $ 182 xilli hoose illaa 320 xilli sare. Wifi si gooni ah ayaa loo bixiyaa. Cinwaanku waa 341 Broome Street.
Ikhtiyaarkeenna labaad ayaa ah Moxy in Times Square, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ahaato bartamaha goobta, Midtown. Huteelkan wuxuu ku yaal mashquul Toddobaad Avenue, isgoyska 36th Street, oo ku teedsan Degmada Fashion iyo Times Square. Leh in ka badan 600 qol, yar yar oo dhan oo ah kan ugu weyn ee istuudiyaha. Laakiin way fiican yihiin oo ay naqshadeysay shirkad aad moodada moodada u leh oo la yiraahdo Yabu Pushelberg.
Midabada dhexdhexaadka ah, xoogaa taabasho rustic ah, telefishanka dhamaantood, qubeys, baarka dabaqa labaad oo sidoo kale u adeega cuntada iyo a bar terrace si aad u daawato gabbaldhaca magaalada New York ama aad u quraacdo subaxa hore. Qayb ka noqo Silsiladda Marriot oo qiimayaashu ka bilaabmaan 176 Dollar.
Xulashada seddexaad waa tan Hotel Alof, oo ku yaal Bartamaha Magaalada Manhattan, midab wanaagsan. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa waddooyinka William iyo Nassau ee Degmada Maaliyadeed, sidaa darteed waxaad ugu lugeyn kartaa Xarunta Ganacsiga ee Word ama Wall Street ama socodka wabiga East River wax ka yar 15 daqiiqo
Waxay leedahay 128 qol oo casri ah leh waxyaabaha aasaasiga ah (miiska, telefishanka, kafee sameeyaha, nabdoon, biyaha dhalada ku jira iyo timo qalajiyaha). Ma haystaan ​​minibar, sariiraha waa kuwo raaxo leh qolalka qaarna waxay leeyihiin aragtiyo wanaagsan. Waxay leedahay bar yar, barxad dambe, jimicsi, xarun ganacsi, iyo baarar fudud oo 24-saac ah. Waxa aysan haysan waa makhaayad laakiin waxaa laga dalban karaa bannaanka iyada oo loo marayo adeeggeeda loo yaqaan Butler.
Qolalka laba jibaaran waxay ka bilaabmaan $ 140 xilli dhimis ah ilaa 260 xilli sare. Quraacdu waa ikhtiyaari waxayna u dhaxaysaa $ 10 illaa $ 20 qofkiiba. WiFi waa lacag la’aan. cinwaanku waa 49-53 Ann Street.
Nasiib darro waxay ku taal Degmada Flatiron waana a isku dhafka hoteelka hudheelkaIsaga, wax aad moodada oo ku dhashay Miami oo yimid NYC. Waxay ka shaqeysaa hudheel duug ah, George Washington, kaas oo gebi ahaanba la soo celiyey loona beddelay iskudhafkan nasashada iyo qabow ee aanad ka joogsan doonin inaad sawirro ka qaaddo.
Fursadaha qolka ku jira waxaa ka mid ah sariiraha sariirta, boqorka, sariiraha boqoradda, iyo qolal saddex ah. Waxaa jira laba makhaayadood, Simon & The Whale iyo Studio, qado iyo casho, iyo maqaaxi la yiraahdo Simle iyo Go oo cunnada fudud iyo ka-qaadis ah. Siciraduhu waxay ka bilowdaan $ 113.
Waad jeceshahay Brooklyn? Markaas waxaad isku dayi kartaa ah Hotel NU, oo ka dhex shaqeeya dhisme dabaq ah oo ku yaal Smith Street, oo ah goob si fudud marin ugu heleysa xaafadaha sida Cobble Hill, Park Slope ama Prospect Heights. Tani toban daqiiqo uun u jirta Buundada Brooklyn kuna dhow tareenka dhulka hoostiisa mara. Waa wax yar huteelka caanka ah oo leh jikada furan oo quraacda u adeegta subax kasta isla markaana miisaskeeda u qaadda banaanka xagaaga.
Qolalka waxay leeyihiin dareemid saqaf sare, waa sahlan yihiin, raaxo badan yihiin alwaax badan. Waxaa jira baaskiil bilaash ah, jimicsi 24-saac ah, WiFi iyo adeegga qolka. Hayso 93 qols iyo qolalka waawayn marka la barbar dhigo waxaad badanaa ku aragto Manhattan. Waxaa ku yaal qolal leh sariiro labo jibbaar, sariiro jiif ah iyo xitaa mid leh hammock.
Kaliya quraac ayaa la bixiyaa. Qiimayaasha? Laga soo bilaabo $ 149 qol laba-jibbaar ah xilli hoose illaa 379 xilli sarreeya. WiFi waa lacag la’aan. Cinwaanku waa 85 Smith Street, Brooklyn.
Ma jeceshahay dabaqyada Markaas waxaad u guuri kartaa Soho oo aad ku nagaan kartaa meesha Arlo Soho. Waxay bixisaa qolal yar yar, wadar ahaan 325, laakiin si fiican loo qaabeeyey oo leh adeegyo ku filan. Waxaa jira fursado badan, leh terrace, oo leh sariiro dhaadheer, oo leh aragtiyo magaalada ... Laakiin dabcan, hudheelku waa u qalmaa barxadda uu haysto, weyn, maadaama ay astaan ​​u tahay sawirka ugu fiican oasis magaalo inaad qiyaasi karto.
Qolalka waxay leeyihiin minibar, TV shaashad fidsan, miis iyo WiFi. Waxa kale oo jira bar laga soo galo iyo barxad wanaagsan oo ku darsata baarka dusha sare. Waxaa sidoo kale jira suuqa 24-saac gudahood. Qolalka waxay ka bilaabmaan $ 149. waxay ku taalaa 231 Hudson Street, SoHo.
Silsiladda ka socota Nederland, MuwaadinM, waxaad ku leedahay huteelkaaga halkan New York. Waxay ku saabsan tahay fikradda «Raaxo la heli karo«. Huteelku wuxuu leeyahay 21 dabaq oo la furay 2014. Waxay bixisaa 230 qol oo yaryars laakiin raaxo leh, oo leh alaabada Switzerland, a bar leh aragtiyo dusha sare ah oo ku yaal berriga, maqaaxi furan 24 saac maalintii iyo goob aad u qurux badan.
Qolalka labajibaaran waxay leeyihiin qiimo laga bilaabo $ 170. Hoteelka ayaa ku yaal 218, West 50Th Street.
Ugu dambeyntii, hudheel kale oo ku yaal Brooklyn: the Xitaa Hoteelka. Waa a hudheel deggan, oo leh meelo lagu nasto ama lagu shaqeeyor, oo leh ciyaaro iyo buugaag. Waxa kale oo jira istuudiyaha loogu talagalay yoga ama fasallada wareega. Waxay bixisaa WiFi, makhaayad, adeegga qolka iyo qolka nabadgelyada, alaabada qubeyska, qubeyska lagu nasto iyo baarka yar.
Laga soo bilaabo qolalka dabaqyada sare aragtiyadu ma niyad jabi doonaan. Aamiin taas dabaqa toddobaad waxaa ku yaal bar furan Iyada oo leh aragti quruxsan oo xaafadeed, wax la yaab leh oo tixgelinaya inay tahay New York.
Qolalka laba jibbaaran ayaa leh qiimayaal laga bilaabo 195 doolar xilli hoose ilaa 305 xilli sare. Quraacdu waa gooni oo qofkiiba wuxuu u dhexeeyaa $ 20 illaa $ 30. Huteelka EVEN wuxuu ku yaal 46 Nevins Street, Brooklyn.
Suurtagal maaha in dib loo eego dhammaantood Hoteelada New Yorkk, waxaa jira ikhtiyaarro badan, markaa haddii aad jeceshahay inaad ku quusato webka adiga oo raadinaya kuwaaga, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo tixgelinaya xulashooyinkaan kala duwan. Nasiib!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » New York » Huteelada ku yaal New York, xulashooyin raqiis ah oo wanaagsan
Maxaa lagu arkaa San Antonio, Ibiza
Maxaa lagu arkaa magaalada Basel, Switzerland